धमाधम वडा कार्यालय निर्माण गर्दै पालुङ्टार नगरपालिका – गोर्खा संसार
गोर्खा संसार२०७५, १६ मंसिर आईतवार १५:२६
पालुङ्टार, गाेरखा ।
पालुङ्टार नगरपालिकामा यतिवेला धमाधम वडा कार्यालय निर्माणका काम भइरहेको छ । स्मार्ट सिटीको रुपमा विकसित पालुङ्टारमा वडा कार्यालयको भूकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माणको कामले तीव्रता भएको हो । नगरपालिकाले वडावासीको माग र सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखेर धमाधम वडा कार्यालय निमार्ण सुरु गरेको हो । नगरपालिकाले विभिन्न वडाहरुलाई आफ्नै भवनवाट सेवा दिने वातावरण वनाउनको लागि धमाधम वडा कार्यालय निर्माण सुरु गरेको पालुङ्टार नगरपालिकाका नगर प्रमुख ई. दीपकवावु कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
वडा कार्यालय निर्माण भए पछि कार्यालयको सेवा सुविधा छिटो छरितो र गुणस्तरीय हुने वताउँदै उहाले हाल तीन वटा वडा कार्यालय निर्माणधिन रहेको जानकारी दिनुभयो । पालुङ्टार ३, ८ र ९ को वाड कार्यालय निर्माणको काम तीव्र रुपमा अगाडी वढेको र आगामि दिनमा अन्य वडामा पनि कार्यालय निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको कँडेलले जानकारी दिनुभयो । पालुङ्टार नगरपालिकाको ससर्त अनुदानमा वडा नं ३ को वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ । उक्त कार्यालय भवन निर्माणको लागि दिपज्योति निर्माण सेवा गोरखासंग भ्याट सहित कुल ७० लाख ७९ हजार ४ सय ५ रुपैयामा निर्माण सम्झौता भइ काम सुरु भएको नगरपालिकाका इन्जिनियर अनुप देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
गत जेठ ९ गने संझौता भएको उक्त वडा कार्यालय भवन निर्माणको काम आगामी माघ ९ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सहमति भएको देवकोटाले वताउनु भयो । यसैगरी पालुङ्टार ८ को वडा कार्यालय निर्माण कार्यले पनि तीव्रता पाएको छ । अकला माई कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. कास्किले निर्माणको ठेक्का लिएको उक्त वडा कार्यालय भवन भ्याट सहित ७३ लाख ४० हजार एक सय ८५ रुपैयामा निर्माण गर्ने संझौता भएको इन्जिनियर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
गत जेठ १५ गने संझौता भएर काम सुरु भएको उक्त भवन आगामी माघ १५ गने सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी पालुङ्टार ९ को वाडा कार्यालय भवन पनि निर्माणाधिन अवस्थामा छ । युनिक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. चितवनले उक्त वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि भ्याट सहित ६२ लाख ३० हजार, ८ सय ५० रुपैयामा ठेक्का लिएको हो । गत साउन ९ गने संझौता भई काम सुरु भएको उक्त वडा कार्यालय भवन निर्माणको काम आगामी चैत्र ९ गते सक्नु पर्ने सहमति भएको इन्जिनियर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
अधिकांश वडा कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा असुविधा भएको हुँदा वडा कार्यालय भवन निर्माणको काम प्राथमिकताका साथ अगाडी वढाईएको जानकारी दिँदै नगरपालिकाका मेयर कँडेलले आगामी दिनमा अन्य वडा कार्यालय भवन निर्माणको कामलाई ध्यान दिने वताउनु भयो । आफ्नो पालामा सवै वडाले आफ्ना सेवाहरु आफ्नै भवनवाट दिने वातावरण वनाउन पहल गरेको उहाको भनाई थियो ।